Ukukhulelwa - isikhathi esimnandi sokuphila zonke sowesifazane, futhi akukho lutho olungasehlukanisa akusibekele: akukho ekuseni ngaphandle kokugula, ukutubeka noma izinguquko njalo kwemizwa. Kodwa izinto zingenzeki njalo ngokushelela njengoba singathanda. Kukhona amacala lapho kwesibeletho iza ithoni, okuyinto iyingozi ngoba unina nele-fetus. Yikho kanye iphathwa kanjani, ake sixoxe olwengeziwe.
Uyini ithoni ekukhulelweni, futhi yini okufanele uyenze?
Kuwo wonke ncwadi yezokwelapha ukuthi ihlanganisa nezindaba ezihlobene nokukhulelwa kanye womama, udaba lolu sixoxe ngezinga elithile lokho kusho ukuthini kwesibeletho isesimweni esihle, futhi kanjani ukulwa naso. Mhlawumbe-ke, bazi, ngisho nalabo hhayi ukhulelwe. Futhi sonke ngoba ithoni kwesibeletho kungenzeka imiphumela kwesisu, lantambama sokukhulelwa, kwesisu, ngasekupheleni noma, Ngakolunye uhlangothi, lapho ebeletha ngoba engalutholanga ekuseni. Ngokuvamile, konke kangaka wesabe abesifazane, imindeni yabo kanye odokotela, ababuka Yiqiniso yokukhulelwa.
Ngingayithola kanjani ukucacisa ukuthi kwesibeletho isesimweni esihle?
Njengomthetho, kowesifazane ngokwakhe azizwa ke. Ikakhulukazi, kukhona isimo, uma ithoni kwesibeletho engxenyeni yezinyanga ezintathu zesithathu. Anakho ukubonakaliswa ezifana ubuhlungu ukubelesela esiswini futhi emuva, njengawo ngaphambi kokuqala esikhathini. Kulesi ubuhlungu kungenzeka cramping noma kwesibeletho iba nzima njengoba itshe.
Phakathi Ukuhlola esiswini sowesifazane sangasese luhlolo ithoni kwesibeletho e yokuthathu yesithathu ke kuchazwa kakhulu ukumane. On ultrasound Lembula mfushane imisipha zesivikelo sesifuba. Kukhona idivayisi ekhethekile esiza ukukala amandla ukusikwa we myometrium ngesikhathi sokukhulelwa, nakuba kuthandwa kakhulu, lokhu akusho ukuthi ukujabulela: izimpawu zalesi sifo futhi kubonakale.
Yini okufanele ngiyenze uma kukhona ithoni kwesibeletho e yokuthathu yesithathu?
Uma lezi zimpawu sizivezile ngesikhathi sokukhulelwa, ungathatha ngokwakho antispasmodic, isibonelo, akukho-silos. Uma izimpawu zalesi sifo namanje okuphindaphindiwe, khona-ke kufanele nakanjani ukuya kudokotela. Udokotela akunikeze imithi, wembatha ukongiwa uma kunesidingo.
Uma kukhona hypertonicity kwesibeletho e yokuthathu yesithathu, kubaluleke kakhulu ukusungula kwimodi ejwayelekile yomsebenzi kanye nokuphumula, ulale kahle, isikhathi esiningi ngaphandle, kanye hambisa. Uma impatho sinenkonzo yokunakekela iziguli emakhaya kungasizi, owesifazane siyofakwa esibhedlela ukuze alondeke. Lapho, ngaphansi kokuqondisa njalo udokotela atawutadishelwa ukujula izimbangela Hyper, ngakho ukuqeda ke. Uma amazinga progesterone kakhulu is ongaphakeme ke uphuzwe amaphilisi. Uma eziningi androgens, le omelene iqondiswa. Kulokhu, lo wesifazane kubalulekile every single day, okuyinto bandisa sokukhulelwa.
Kwakheka ingane ofinyelele amasonto 28. Ngemva kokusinda ethemini njalo ecacisiwe kakhulu, kodwa akusho ukuthi ingane kuyoba ephelele. Khulisa iphuzu elithile kanye isisindo somzimba wakhe e unina engcono, futhi esingekho incubator.
Ukuvimbela lesizalo ithoni
Uma sikhuluma nokuvimbela kulesi simo, kungenzeka ukuba uhlu zonke izinyathelo, ezibangela ilungiselelo lokuphumula, ukuqabuleka enempilo, kanye ukuthola esifike iziyaluyalu hormone, izifo sokuvuvukala izifo zobulili ezihlukahlukene. Ukuze uvimbele okuvela lesizalo ithoni, kubalulekile ukuba balandele yonke izincomo udokotela ngesikhathi sokukhulelwa usuvele uqalile, kuhlanganise nokwelashwa ngemithi, nokudla umbuso.
Jackets Denim - fashion jikelele
Hero of Heroes of the Storm Illidan: guide Illidan e Hots
Sebenza zomlando. Indlela ukuvula ifayela rar?
Andrew Barilo - umlingisi abanamakhono of yaseshashalazini kanye cinema
Inkhulumongco nenkhulumombiko ngesiNgisi
CVT ukuba "Nissan X-Trail": Izibuyekezo wabanikazi ukuxhashazwa
Lunye - lena ubuso isimo